Thenga Ku-inthanethi | I-Ota Ward Cultural Promotion Association
Uma uza kuphrojekthi exhaswa yinhlangano, sicela uhlole "Mayelana nemizamo yenhlangano yokuvimbela ukusabalala kwesifo ngesikhathi sokusebenza" kanye nokuthi "Izicelo kuwo wonke umuntu oza kulo mdlalo" ngaphambi kokuza endaweni.
Mayelana nemizamo yenhlangano yokuvimbela ukusabalala kwesifo ngesikhathi sokusebenza
Cela wonke umuntu oza ekusebenzeni
Ukubhuka kusuka ku-inthanethi
Itholakala amahora angama-24 ngosuku. (Ngaphandle kwesikhathi sesondlo kusuka ku-3: 4 am kuya ku-XNUMX: XNUMX am)
Ukubhaliswa kobulungu kuyadingeka ngaphambi kwesikhathi ukusebenzisa insiza.
Ngezihlalo ezibekiwe, ungakhetha inombolo yakho yesihlalo oyithandayo.
Sicela uqhubeke kusuka kokulandelayo uye ekhasini lokuthengisa online.
Kusukela ngomhlaka-3 Ephreli, unyaka wesithathu kaReiwa, kuzoshintshwa i- "Ota Ward Cultural Promotion Association Online Terms".
Sicela uhlole okuqukethwe.
I-Ota Ward Cultural Promotion Association Imigomo Yokusebenzisa eku-inthanethi (2021 revision)
Ikhadi lesikweletu (VISA / Master / JCB / AMERICAN EXRESS / Diners Club)
Imali (kuphela lapho uthola amathikithi kwaFamilyMart)
Ungalithola kanjani ithikithi
・ Ukubhuka kungenziwa kuze kube ngu-19: 00 ngosuku olwandulela ukusebenza.
Is Akukho ukubhaliswa kokusebenzisa insiza Yethikithi le-MOALA.
・ Ungahlola imininingwane yokuthenga ekhasini lami ku-Ota Ward Cultural Promotion Association ithikithi online.
URL I-URL yolwazi lwethikithi izothunyelwa ekhelini le-imeyili (i-smartphone) elibhaliswe kusasele isonto ngaphambi kokusebenza.
Will Kuzokhokhiswa imali ehlukile yama-yen eyi-150 ngethikithi ngalinye.
* Omakhalekhukhwini kanye namathebulethi ngaphandle kwama-Smartphones awakwazi ukusetshenziswa.
・ Sicela usebenzise i- "Fami Port" efakwe esitolo bese uyithatha lapho kubhaliswa khona imali.
1 Cha XNUMX (ikhodi yenkampani "30020") Futhi inombolo yesibili (inombolo yokushintshanisa (amadijithi ayi-2 aqala ngo-8)) ayadingeka.
Chofoza lapha ukuthi ungayisebenzisa kanjani irisidi ye-FamilyMart
・ Ukubhuka kungenziwa kuze kube amasonto ama-2 ngaphambi kosuku lokusebenza.
Will Sizoyiletha ngeYamato Transport.
You Uma ungekho, kunesevisi yokuphinda uthumele kabusha enosuku nesikhathi esishiwo.
Ngaphezu kwemali ekhokhwa ngamathikithi, kuzokhokhiswa imali yokuhambisa engama-yen angama-450 ngethikithi ngalinye.
Amathikithi awakwazi ukushintshaniswa, aguqulwe noma abuyiselwe imali.
Amathikithi ngeke aphinde akhishwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo (kulahlekile, kushisiwe, kulimele, njll.).
Empeleni, indlela yokwamukela enqunywe ngesikhathi sokuthenga ayinakuguqulwa.
Ukulethwa kungokwasekhaya kuphela.Asithumeli phesheya kwezilwandle.
Uma ungatholi ukulethwa okuzenzakalelayo kwe-imeyili kusuka kwinsizakalo yamathikithi aku-inthanethi Ukulethwa kusuka kuseva ejwayelekile yedatha yedatha kungahlulelwa njenge-imeyili engenamsebenzi.Sicela ubheke kokulandelayo ukuthola izindlela ezijwayelekile zokusekela.
Uwasebenzisa kanjani amathikithi aku-inthanethi
Sicela ubheke kule vidiyo elandelayo ukuthi ungabhalisa kanjani futhi uthenge amathikithi aku-inthanethi.
Ungabhalisa kanjani njengelungu lamathikithi aku-inthanethi
Ungalithenga kanjani ithikithi eliku-inthanethi
Isaziso maqondana nokwenqatshelwa kokubuyiselwa kwamathikithi
Mayelana nokuvinjelwa kokuthengiswa kabusha kwamathikithi